Koofiyadaha iyo Xiritaanka Soo -saareyaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadaha Daboolka iyo Xiritaanka Shiinaha
Dabool caag ah oo aluminium ah
Waxaan leenahay tilmaamo kala duwan oo dabool caag ah oo aluminium ah. Inta badan laga sameeyay dahab iyo qalin, midabyo kale ayaa sidoo kale la beddeli karaa. Waxaa loo isticmaali karaa sida daboolka dhalooyinka caagga ah iyo dhalooyinka dhalada ah, muuqaalka kore-sarena had iyo jeer wuxuu ilaaliyaa sawir xarrago leh. Baaxadda dalabka: weelka cuntada, weelka la isku qurxiyo, weelka nacnaca packaging baakadaha daawada, baakadaha hadiyadda ee aadka u fiican. Afka daboolka iyo dhalada ayaa leh wax-qabad aad u wanaagsan, kaas oo caafimaad qaba, ammaan ah oo hawo-maran. Goomaha wax lagu xiro ayaa la geliyaa gudaha, taas oo si sahlan loo isticmaali karo. caag caag ah wax bakteeriyada, ammaan iyo bay'adda u fiican, fiican oo is haysta.
Koofiyadaha dhalada caagga ah ee aan caddayn ee ilmaha PP
Tilmaamaha kala duwan ee daboolka caagga ah ee PP oo leh giraanta badbaadada, midab kasta waa la beddeli karaa. Waxaa loo adeegsan karaa koofiyadaha dhalooyinka caagga ah iyo dhalooyinka dhalada ah, muuqaalka kore-sarena had iyo jeer wuxuu ilaaliyaa muuqaal xarrago leh. Baaxadda dalabka: weelka caagga ah, weelka kareemka, weelka kaydinta, weelka uunsiga, weelka cookie, dhalooyinka balaastigga ah ee afka ballaadhan. Daboolka iyo afka dhalada ayaa leh wax -qabad shaabad aad u wanaagsan, kaas oo caafimaad qaba, ammaan ah oo aan hawo lahayn. Gogosha ayaa la geliyaa gudaha, taas oo ay fududahay in la isticmaalo. weel caag ah oo loogu talagalay walxaha ka hortagga bakteeriyada, nabdoon iyo bay'ada u fiican, aad u fiican oo is haysta.
20-410 Buufiyo Qoosh Wanaagsan oo Cufan leh Hood Cad-0.15cc Waxsoosaarka 10 Tube Dhex
Our 18-410 Side Black Rib Side PP Fine Mist Sprayers waa buufin ujeedo guud oo aad u fiican oo loogu talagalay qaybinta alaabada codsi dabacsan. Nidaamka fidinta wuxuu leeyahay 10 ″ dhuub-dhuuban wuxuuna bixiyaa 0.15cc halkii camal ee ceeryaamo khafiif ah, oo ku habboon daryeelka shaqsiyeed iyo alaabada quruxda. Xiritaanka qaybinta wuxuu ka kooban yahay dabool/dabool boodh PP ah oo hufan si loo hagaajiyo ilaalinta badeecada isticmaasho. Dhinacyada feeraha ee xiritaanku waxay sahlayaan in meesha laga saaro oo lagu dabaqo weelasha.
18-410 Flip Caaga-0.310 Furitaanka Orifice
Caadiyan waxaa laga helaa shaambooyada, kiriimyada, jellada qubeyska iyo daryeelka kale ee gaarka ah iyo alaabta daryeelka xayawaanka. Teknolojiyadda wax lagu xiro ee cidlaadku waxay ku xidhmi kartaa dhalooyin badan oo caag ah oo leh 18-410 qoorta ugu badnaan. 0.310 opening furitaanka orifice.
108-400 Side Rib Side Matte Top PP Caaga Taxanaha Sii Socda
Dusha sare ee xirmooyinkaaga oo dhammaystiran oo leh 108-400 dhinaca feeraha cad ee PP xidhitaanka dunta caagga ah Dhexroor ballaadhan ee M108mm ayaa ku habboon weelasha afka-ballaadhan sida balaastikada iyo dhalooyinka galaaska ah. Dhinacyada feeraha ayaa fududeeya codsiga iyo ka saarida xiritaanka. Xadhiggu wuxuu kaloo u shaqeeyaa sidii yaraynta qoyaanka, isagoo ka hortagaya qoyaanka inay ka baxaan ama galaan weelka laga yaabo inuu khalkhal geliyo sharafta badeecada.
24-410 biiyaha cad ee dhaadheer ee caaga ah ee PP ayaa tuujiya daboolka
Our Cap Tip Nozzle Cap waa raagaya in la isticmaalo oo si sahlan loo nadiifin karo. Ma jiro dabool qas ah oo ku dhegsan dabool ， si aadan uga welwelin inaad lumiso. Dabool si ammaan ah u leexi si aad u hubiso in koofiyadahaagu ku dul jiraan dhalada marka aad cadaadinayso. Talooyinka cabbirku waxay u bilaabmaan si yar waxayna kuu oggolaanayaan inaad u gooyso caarada cabbirka ku habboon baahiyahaaga. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho faafinta saxda ah haddii aad bixinayso saliid ama dufan canjeero. Kaliya iska jar caarada si aad ugu haboonaato baahiyahaaga. Ku fiican BBQ, safarka kaamamka iyo waxyaabo kaloo badan.Waxay qaadataa maaddo balaastig ah oo u dhiganta cunno-saaxiibtinimo leh, jilicsan oo si sahlan loo bixin karo. Ka sokow, waxay leedahay daxal xoog leh, acid iyo iska caabin alkali. Waa inay noqotaa caawiyaha wanaagsan ee jikada, caafimaad qabta, iska caabinta heerkulka sare, biyo -mareenka, culayska fudud. Koofiyaduhu waxay ka hortagaan daadinta oo ka dhig waxyaabaha ku jira mid fudud.Waa sahlan tahay inaad shubto, calaamadiso oo aad aqoonsato udugga aad jeceshahay, ama cabitaan kasta oo kale oo ay ku jiraan rinjiyeynta farshaxanka iyo xalalka nadiifinta.
Dhalada Dhalo -hayaha Dhalada ah ee aan Xadhkaha lahayn ee Sterilizer Tweezers Resistance Heat
Kuleylka iska caabinta marooyinka caaga ah ee dhalooyinka ilmaha Dhalada dhalada ah ayaa lagama maarmaan u ah nadaafadda si loo maareeyo dhalada caanaha dhallaanka. Gacan qaloocan oo si gaar ah loo naqshadeeyay iyo jeexidda hannaanka aan siibasho lahayn ayaa si fudud u qabsan kara dhalooyinka, mujuruca, barafka ama gacan kale oo aad u adag in la soo qaado alaabooyinka yaryar. caafimaadka, badeecadu waxay u adkaysan kartaa 110 ℃.